महामारी अर्थव्यवस्थामा थोक बिक्रेताको लागि नयाँ समाधान - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक अक्टोबर 4, 2020 डिसेम्बर 16, 2020 थोक र B2B समीक्षा अर्जेन्टिना थोक र B2B, एशिया थोक र B2B, बंगलादेश थोक र B2B, बेल्जियम थोक र B2B, बेलायत थोक र B2B, बुल्गारिया थोक र B2B, व्यापार, क्यानाडा थोक र B2B, चीन थोक र B2B, चेकोस्लोवाकिया थोक र B2B, डेनमार्क थोक र B2B, DR कांगो थोक र B2B, सम्पादकको पिक, इजिप्ट थोक - B2B, फ्रान्स थोक - B2B, जर्मनी थोक र B2B, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्रीस थोक र B2B, ह Hongक Kong थोक र B2B, हंगेरी थोक र B2B, भारत थोक र B2B, इन्डोनेशिया थोक र B2B, इटाली पसल थोक र B2B, जापान थोक र B2B, केन्या शप ग्लोबल, मेक्सिको थोक र B2B, नाइजेरिया थोक - B2B, पाकिस्तान थोक र B2B, फिलिपिन्स थोक र B2B, रूस थोक र B2B, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, दक्षिण अफ्रीका थोक - B2B, दक्षिण कोरिया थोक र B2B, स्पेन थोक र B2B, थाईल्याण्ड थोक र B2B, टर्की थोक र B2B, युक्रेन थोक र B2B, थोक - B2B, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
धेरै व्यवसाय र उद्योग महामारी अर्थव्यवस्था को नयाँ वास्तविकता अनुकूल बनाउन बाध्य भएको छ। धेरै उदाहरणहरूमा, यसले शारीरिक बाट अनलाइन स्टोरफ्रन्टहरूमा परिवर्तन गर्दछ। यहाँ फेरि, विश्वव्यापी थोक बजार अपवाद छैन।
थोक बिक्रेताको लागि नयाँ अनलाइन, ग्लोबल स्टोरफ्रन्ट प्रविष्ट गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, एक समाचार कम्पनीको स्वामित्वमा विश्वव्यापी पहुँच र द्रुत वृद्धिको एक प्रमाणित ट्र्याक रेकर्डको साथ।
ग्लोब शपका फाइदाहरू
ग्लोब शपले १०० भन्दा बढी प्रमुख भाषाहरूमा उत्पादनहरूका लागि सूचीबद्ध प्रदान गर्दछ, अफ्रिकीबाट जुलु. ग्लोब शपले पनि विभिन्न प्रकारका मुद्राहरू प्रदान गर्दछ, अफगानीबाट Zlotys सम्म, बाटोमा अधिकको साथ।
यसले विक्रेताहरूलाई स्वचालित रूपमा उनीहरूका उत्पादनहरू खरिदकर्ताको मुद्रामा र उनीहरूले बुझ्ने भाषामा सूचीत गर्न अनुमति दिन्छ। नतीजा एक अधिक कुशल, एक रोक्ने शपिंग अनुभव हो, विश्वव्यापी स्तरमा लगभग सबै प्रकारका व्यापारहरूका लागि खुला।
खरीददारहरूको लागि, ग्लोब किन्नुहोस् खोजी र फिल्टरहरू प्रयोग गर्न सजिलोको माध्यमबाट उनीहरूलाई उनीहरूको मनपर्दो उत्पादनहरूमा मार्गदर्शन गर्दछ। खरिदकर्ताहरूले देश वा श्रेणीबाट ग्लोब शपमा फिल्टर गर्न सक्दछन्, तिनीहरूलाई व्यक्तिगत स्टोरफ्रन्टहरूमा निर्देशित गर्न। अधिक महत्त्वपूर्ण कुरा, ग्लोब शपले खुला र सीधा संचार मार्फत ग्राहकहरूलाई उनीहरूको क्षमता र दक्षता प्रदान गर्दछ।
विक्रेताको लागि, शॉप ग्लोबको मात्र शुल्क लाग्छ उनीहरूले बेचेको १२%। ग्लोब शप गर्नुहोस् महँगो, र धेरै घटनाहरूमा बहुपर्यापी बिचौलिया हटाउनुभएको छ। यसले ग्लोब शपलाई विक्रेताको लागि सूचि र बाहिरको जेब लागतमा लिस्टिंग र समाचार प्रकाशनहरू प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ। ग्लोब किनमेल गर्न पनि धेरै थोरै सेट अप समय वा प्रयासको आवश्यक पर्दछ, उत्पादन लिस्टरहरूलाई मैदानमा हिट हुन अनुमति दिदै।
ग्लोबल न्यूज कम्पनी द्वारा स्वामित्व प्राप्त
ग्लोब शप ग्लोबल समाचार कम्पनीको स्वामित्वमा छ, सांप्रदायिक समाचार, जहाँ पाठकहरूको आवाज छ। जो कोहीले हाम्रो लक्षित लेखहरू साम्प्रदायिक समाचारहरूमा पढ्न सक्छन्, गुगल समाचार, वा फेसबुक समाचार। सांप्रदायिक समाचारले बजारमा गहन नजर राख्दछ, अप-टु-डेट रिपोर्टहरू र बिभिन्न उत्पादन र सेवाहरूको पूर्वानुमान प्रदान गर्दछ।
ग्लोब शप कम्पनीको तेस्रो साइट हो, साथै फ्रीलान्स ग्लोबल गिग दुबैले छोटो समयावधिमा ठूलो वृद्धि प्रदर्शन गरेका छन्, हाम्रा विक्रेताको लागि कुनै वा न्यून लागतमा एक वैश्विक प्लेटफर्म निर्माण गर्दै। हाम्रो साइट को बारे मा अधिक जानकारी को लागी, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
यो आत्म स्पष्ट छ कि यी अनिश्चित समय हो। यस्तै, यो निश्चित तर केहि निश्चित छ कि महासand्घको अर्थतन्त्र फिर्ता आउनेछ एक पटक सated्कट समाप्त भए पछि, जे भए पनि। यसले विश्व थोक बजारको संरचना र अक्षमता समावेश गर्दछ।
ग्लोब शप गर्नुहोस् एक नयाँ विकल्प, खरीददारहरूको लागि नयाँ द्रुत समाधान जुन उनीहरूले चाँडो र सजीलै खोज्न चाहन्छन्, र विक्रेताको लागि उनीहरूको नाफा विस्तृत रूपमा विस्तार गर्न सक्दछन्। आजै प्रयास गर्नुहोस्! ग्लोबको ग्लोबल थोक विक्रेता दर्ता खरीद गर्नुहोस् नि: शुल्क छ।
सांप्रदायिक समाचार कोरोनाभाइरस कोभिड 19 ग्लोब किन्नुहोस् थोक थोक खरीद
चीनमा घरेलु हिंसाको अनसुना आवाज
समानता मुद्दा चेतावनी - एक महिला के उनी मूर्खको बनाईएको जस्तो नदेखीकन प्रदायक बन्न सक्दछ?